Richard Mille RM011-02 Fanontana Shanghai
Richard MilleSKU: RIC752674696
RM011-02 NTPT Shanghai Edition. Voafetra amin'ny sanganasa 30 fotsiny ary navoakan'ny butikety Shanghai ihany. Ity famantaranandro tsy fahita firy ity dia mametaka izay rehetra mahatonga ny RM011-02. Tafiditra ao amin'ny NTPT an'i Richard Mille ary miaraka amina fehin-kibo fotsy. Hetsika mihodinkodina mandeha ho azy miaraka amina ora, minitra, segondra amin'ny 3 ora, daty lehibe, volana, fandaharam-potoana miverimberina miaraka amin'ny minitra sy kaontera miisa amin'ny 9 ora, kaontera ora amin'ny 6 ora, fiasa UTC ary rotor geometri-variable. Circa 55 ora (± 10%), 45 ora miaraka amin'ny fihazakazahana. Ny valiny fitehirizana herinaratra tena izy dia miankina amin'ny fampiasana kronografia
modely RM 011
Kaodin'ny vokatra mpivarotra Richard-Mille-RM011-02-Shanghai-Fanontana
Pejy fanolorana Carbon
Taona famokarana 2016
Vovonan'ny raharaha 49 MG
Clasp Clasp roa heny
Chronograph, Flyback, Daty, Volana
Fanontana Misy fetrany